Shandad Gaadhida Cuntada ah
Bacda dahaarka aluminiumka
Bacda dahaarka kuleyliyaha ee aluminiumku waa boorso wax ku ool ah oo lagu sameeyo iyadoo la isticmaalayo aluminium-foil-ka kooban ee suuf luul ah oo ah walxaha mashiinnada wax lagu sameeyo. Waxa ay door wax ku ool ah ka ciyaari kartaa ilaalinta kulaylka, sidaa awgeed waxa si weyn looga isticmaalaa meelaha qaar oo ilaalinta kulaylku qabow yahay...
Alaabta looga baahan yahay bacaha dahaarka
Sida aan wada ognahay, bacda dahaarka kulaylka waxay leedahay dahaarka kulaylka aad u wanaagsan, kaydinta qabow iyo saamaynta cusub ee ilaalinta. Xataa haddii ay tahay qorrax aad u kulul ama dhalaalidda barafka iyo barafka, cuntada gudaha ku jirta ayaa weli ah mid sax ah oo sax ah. Kadibna, magaca xirfadeed ee kulaylka ins ...
Wax ka baro baakadaha qaadashada
Fikradda xirmooyinka la-qaadista Bacda-qaadista ayaa ah bac leh waxqabadka xayaysiinta kuleylka kuleylka loo isticmaalo gaarsiinta cuntada. Horumarka heerka nolosha iyo sare u kaca warshadaha cuntada, qaadashada waa korriin cusub oo faa'iido...
Falanqaynta dahaarka alaabta iyo waxqabadka ilaalinta qabow ee bacaha daboolka aluminiumka
Waxa jira kelmad aan hore looga baran, oo laga yaabo in aanu qof walba si fiican u garan, oo loo yaqaan talaajad dadban. Dhab ahaantii, talaajad dadban waa alaabo ay ka mid yihiin bacaha dahaarka aluminium, bacaha barafka, iyo bacaha barafka oo aan caadi ahaan aragno. Alaabtani waxay leedahay kulayl aad u wanaagsan waxayna leedahay...
Faa'iidooyinka bacaha dahaarka
Bacaha dahaadhku kaliya ma xalliyaan dhibaatada dahaarka ee dadka u soo qaada cuntadooda u gaarka ah ee dalxiiska inta lagu jiro fasaxyada, laakiin sidoo kale waxay xalliyaan dhibaatada daboolka cuntada ee shaqaalaha xafiiska. Jiilka cusub ee dhalinyarada Shiinaha ayaa si isa soo taraysa u dalban doona dahaarka cuntada...
Maxay yihiin taxaddarrada ilaalinta iyo isticmaalka baakadaha dahaarka ee aan timaha lahayn?
Xilliga xagaaga, shirkado badan oo badan ayaa bilaabaya inay isticmaalaan bacaha dahaadhka ah ee aan timaha lahayn, gaar ahaan shirkadaha cuntada, sababtoo ah baakadaha dahaarka ee aan timaha lahayn ayaa looga baahan yahay baakadaha cuntada sida caanaha iyo jiiska. Si kastaba ha ahaatee, cuntada ku hadhay gudaha dahaarka dharka aan timaha lahayn...
Faa'iidooyinka bacaha aan timaha lahayn
Bacaha aan tolka lahayn (sida badan loo yaqaan bacaha aan tolka lahayn) waa kuwo adag, qurux badan, neefsasho iyo dib loo isticmaali karo. Waa badeecad cagaaran. Laga bilaabo siideynta amarka xadka balaastikada, bacdu waxay si tartiib tartiib ah uga bixi doontaa suuqa baakadaha ee maqaalka waxayna bedeli doontaa ...
Su'aalaha La Waydiiyo Kahor Inta Aan Iibsan Bac Pizza
Doorashada bacda pizza ee saxda ah waxa laga yaabaa inay adkaato oo ay qaadato xoogaa tijaabo iyo khalad ah si aad u hesho bacda kuugu fiican, marmarka qaarkood qiime sare. Waa kuwan afarta su'aalood ee muhiimka ah ee laga jawaabo ka hor intaanad ballan qaadin boorso gaar ah. Su'aalaha soo socda ee la waydiiyo ka hor intaadan iibsan p...
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood. Weydiin
Shandad Gudbinta Cunto
Bacda Kulul Pizza
Boorsada Gaadhida Pizza
Boorsada Gegida kulaylka